Raha mandravarava an’i Bahamas ny tafiotra mahery Dorian, hiaka iray kosa ho an’ireo vahoakan’i Karaiba hiatrehana ny olan’ny toetrandro · Global Voices teny Malagasy
Karaiba, lasa toerana iray fanandramana ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro
Voadika ny 08 Septambra 2019 8:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Italiano, Français, عربي, English
The eye of Hurricane Dorian. Image by Cayobo, CC BY 2.0. …………..Ny mason'ilay tafiotra mahery Dorian. Sary an'i Cayobo, CC BY 2.0.
Sahala amin'ilay anarana tena malaza indrindra mitovy aminy – Dorian Gray, an'ny horonantsary iray malaza an'i Oscar Wilde – naka toetra tena masiaka ny tafiotra mahery Dorian. Satria manakaiky ny fotoana fahatongavan'ireo tafiotra mahery ao Atlantika – 2019 (izay amin'ny ankapobeny ny tapaky ny volana septambra), niha-nahery haingana i Dorian, niteraka faharavàna tao amin'ireo Nosy Abaco any Bahamas ary nitokona be nampihoron-koditra tao Grand Bahama ka nahatonga ny filazan‘ny Ivontoerana nasionaly misahana ireo tafiotra mahery fa hisy “faharavana goavana”.
Nanomboka nahatsapa ny fiantraikan'ny tafiotra mahery ireo faritra marobe ao amin'ny morontsiraka Atsinanan'i Florida, saingy tombanan'ireo mpahay ny toetrandro fa mety hiharan'izay ratsy indrindra ny tanibe amerikana.
“Eto ny dragona”, hoy ny nambaran'ny mpilaza vaovao ZNS News ao Bahamas, izay nandefa nivantana tsy niato an'ireo ampahany, ireo antso vonjy sy ireo nomerao vonjy taitra eo amin'ny Facebook. Fifangaroana onja amin'ny rivotra mahery (onja avo be mahatratra hatramin'ny 6 metatra mahery nihoatra ny fefiloha amin'ny ranomasina), “king tides” sy orana mitohy nitarika tondradrano tsy mbola nisy hatrizay. Nahatratra 298 km isanora ny fitsokan'ny rivotra.
Na dia miady hervitra aza ireo manam-pahaizana mikasika ny fanontaniana te-hahalala raha toa ny fiovan'ny toetrandro ka nndray anjara tamin'ny fitomboan'ny isan'ireo tafiotra mahery , dia samy miaiky izy ireo ka milaza fa mampitombo ny herin'izy ireny ny haavon'ny ranomasina sy ny hafanana. Izany,amin'ny ampahany betsaka, dia noho ny famelàna malalaka loatra ny fientonan'ireo entona vokatry ny fomba fanao manimba ny tontolo iainana, sahala amin'ny fanimbàna ny ala sy ny fandoroana solika azoavy amin-javatra lo.
Ny Lehiben'ny Firaketana ao amin'ny National Art Gallery an'i Bahamas ao Nassau, Holly Bynoe, no nizara ireo fijeriny teo amin'ny Facebook. Ny hafany dia mila atrehan'ny governemanta sy ireo olom-pirenena ao Karaiba amin'ny maso tsy miangatra sy mifantoka tsara ny tena zavamisy momba ny fiakaran'ny hafanana erantany :
Ho voa mafy tokoa ireo Bahamas ato anatin'ireo andro hoavy, be lavitra noho izay nosainin'ny maro amintsika na tsy tiantsika velively ho hita.
Io ratra iraisana sy io fahavoazana io, ao anatin'ny fotoana, ary mety ho haingana be, dia tsy maintsy heverina. Nanambara ny Praiminisitra [Hubert] Minnis […] fa hijery ny fahafahana mametraka amin'ny toerany ny lalàna mifanaraka amin'ny famindran-toerana tsy maintsy tanterahana izy ireo ary antenainy fa tsy hisy vzly bontana mahery setra avy amin'ny mpanohitra.
Tsy olana politika na ny fisiana antoko roa izy ity; fa filàna ho amin'ny zon'olombelona manoloana ny faharatsian'ny toetrandro erantany. Tsy tokony ampiasaina ho toy ny fitaovana na kilalao aminà fandaharanasa politika ny vahoaka eto Bahamas mba hampandrosoana.
Nomarihin‘i Bynoe fa – koa satria ireo vahoaka ao Bahamas efa zatra ny tafiotra mahery , Dorian no tafiotra mahery vaika indrindra tafakatra an-tanety teto hatrizay:
Taorian'i Matthew sy Irma, zara raha nisy ihany ny resaka natao ho an'ny daholobe mikasika ny zava-baovao sy ny sarintany / fisaintsainana firenena vaovao izay tokony haorintsika mba hahafahana miaina ato anatin'ireo zato taona ho avy, sy ao anatin'ireo taonjato ‘raha toa’ ka mbola hahatratra izany isika. Na izany na tsy izany, marefo i Bahamas, satria izy no hita ho toerana iray voalohany ho atelin'ireo ranomasina ao anatin'ity firodananan'ny toetrandro ity. Mety hijery izanyireo sisa ambiny ao Karaiba ary hiteny hoe, “hmm, mbola manana fotoana kely isika”, saingy tsy marina izany. Mila manavao daholo isika rehetra, miaro ny tombontsoantsika ary manomboka an'ity fahasahiana mampiasa vola dieny izao! […]
Lasa kianja fanandramana ny tsy rariny ara-toetrandro i Karaiba-ntsika manontolo. Afangaroy ao ireo politika antitra vitsivitsy dia ny fiainan'ireo olona no iharan'ireo hisatra sy tsindry be. […]
Ireo tenifototra ho an'ny andro roa hoavy dia ny MIOMANA sy ny MILAVO LEFONA
Ny teny avy hatrany dia manaraka azy dia ny ADY.
Andao hataontsika azo antoka fa vitantsika tsara io.
Tamin'ny Septambra 2017, Nosy kely marobe tao Karaiba atsinanana, ary koa i Puerto Rico, no nahatohitra malaky an'ireo tafiotra mahery roa matanjaka: Irma sy Maria. Nosy marobe, sahala amin'ny Nosin'i Dominique, no rava mbola tsy tafarina tanteraka. Na izany aza, nizara hafatra iray fanohanana teo amin'ny Facebook ny natoralista iray monina ao Dominique:
Dihy fanomezamboninahitra ho an'ny mponin'i Abaco, Bahamas avy amin'i Dominique, raha ny tafiotra mahery Dorian kos mandravarava azy ireo. Na mafy toa inona aza, amin'ny lafiny rehetra, mahaiza mankasitraka ary aoka hatoky fa efa an-dalana ny fanampiana. […]
Marobe amintsika no mnahatsiaro ny toerana izay nisy antsika sy izay nataontsika tamin'ny 18 septambra 2017 raha nikapoka an'i Dominique ny tafiotra mahery Maria.
Mampalahelo fa isika, Nosy aty i Karaiba, no mizaka, miatrika ny fiantraika manontolon'ny fiovaovan'ny toetrandro. Saingy na inona na inona hiseho, tsy maintsy manohy isika. Andao isika hiray hina manoloana ny vahoaka any Bahamas ary hanolo-tanana amin'izay fomba rehetra mety azontsika atao.
Isan-taona, miandry ny fiandohan'ny fotoanan'ireo tafiotra mahery i Karaiba, manontany tena ny amin'izay ho entiny – sy izay toerana mety ho voakasika. Nandritra ireo taona efatra farany, dimy ireo tafiotra izay nahatratra ny maridrefy 5 ny heriny, anisan'izany i Dorian.
Raha toa ireo firenena sasany manao izay azo atao mba hiomanana sy hanalefahana ireo loza – ny antokon-draharaha ao amin'ny governemanta Jamaika misahana ny fiovaovan'ny toetrandro kosa, ohatra, dia handray anjara amina semineram-paritra iray hafa mikasika ny fizakàna / fiatrehana ny toetrandro – tonga, angamba, ny fotoana ho an'i Karaiba hiadiana amin'ny olan'ny toetrandro miaraka amina hetsika feno fahavononana sy fanohanana bebe kokoa